​स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्कीको भाषा
२९ अषाढ २०७५
शम्भु श्रेष्ठ । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको मागलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता भेटेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक सर्वसाधारण जनताको हितमा भन्दा मेडिकल माफियाको हितमा ल्याइएको भन्दै १४ दिनदेखि डा. केसी जुम्लामा अनसनरत छन् । दिनहुँ अखबारमा डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएको उल्लेख गरिए पनि सरकार भने डा. केसीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर देखिएको छैन । सरकारको यस्तो रवैयाप्रति सिंगो… विस्तृत समाचार
​सरकारलाई केसीको मागभन्दा स्वास्थ्यको चिन्ता
२८ अषाढ २०७५
शम्भु श्रेष्ठ । डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको पन्ध्र दिन बितिसक्यो । मिडियामा आएको खबर अनुसार उनको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । उनीले बोल्नसमेत सकिरहेका छैनन् । कोही मानिस भेट्न गएमा उनले टुलुटुलु हेर्ने मात्र गर्छन् । डा. केसीको बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षमन्त्रीसम्मलाई भेटिसके । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि… विस्तृत समाचार
​कहिल्यै अनसन बस्न नपरोस्
२७ अषाढ २०७५
शम्भु श्रेष्ठ । सदन र सडकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा बोल्यो भन्दैमा उनीमाथि कांग्रेसको एजेन्डा बोक्यो भनेर आरोप लगाउनु केसीमाथि अन्याय हुनेछ । लोकतन्त्रमा समर्थन र विरोध गर्ने अधिकार नेपाली कांग्रेसका लागि मात्र होइन, हरेक सचेत नागरिकमा सुरक्षित हुन्छ । त्यही सचेत नागरिकको नाम हो डा. गोविन्द केसी । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरवाहीका कारण सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । देशैभरिका अस्पतालमा… विस्तृत समाचार
​केसीविरुद्ध विषवमन ?
२६ अषाढ २०७५
– शिक्षण अस्पतालमा जागिर खाने । सरकारी सेवा सुविधा लिने । अनि जुम्लामा गएर आन्दोलन गर्ने ? अनसन बस्ने वाह, डाक्टर केसी ? – सरकारी जागिर खाएर सरकारकै विरोध गर्न पाइन्न । अनसन बस्ने रहर छ भने टिचिङ अस्पतालको जागिरबाट राजीनामा गर, डा. केसी । – अस्पताल निषेधित क्षेत्र हो । डाक्टरको काम विरामीको सेवा गर्ने हो । निषेधित क्षेत्रमा गएर अनसन बस्नेलाई सरकारले पक्राउ… विस्तृत समाचार
पहिला पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई व्यंग्य गर्नुप¥यो भने– ‘बिरालोलाई रिस उठ्यो भने खाबो चिर्थोछ’ भन्थे । अहिले यो व्यंग्य कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दो छ । विपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताले सिंगो जीवन अर्पण गरेर बनाएको नेपाली कांग्रेस आज विचारले होइन, रिसले चल्न थालेको छ । एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी जब नीति सिद्धान्तविहीन बन्दै जान्छ, तब… विस्तृत समाचार
१९ अषाढ २०७५
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने सादा जीवन उच्च विचारका नेता थिए– मदन भण्डारी । नक्सालमा शैलेन्द्रजंग थापाको घरमा उनको साधारण डेरा थियो । नक्साल डेराबाट बिहान १०–११ बजे प्रायः उनी साइकल चढेर दैनिक बागबजारस्थित नेकपा मालेको कार्यालयमा आइपुग्थे । कहिलेकाहीँ मात्र उनी घरबेटी थापाको रातो कारमा देखिन्थे । जनताको नेता भएरै होला उनीलाई जिउज्यानको मतलब थिएन । उनी हिंड्ने बाटोको अगाडि पछाडि न त सुरक्षाकर्मीको… विस्तृत समाचार
​रेल चढेर समृद्धि आउँदैन
१२ अषाढ २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको शब्दमा यो भ्रमण ऐतिहासिक भ्रमण हो । चीनमा वर्षमा सयौं देशका सरकार प्रमुखहरुले भ्रमण गर्छन् । चीन पुग्ने जुनसुकै देशका सरकार प्रमुखहरुले फर्किएपछि आफ्नो भ्रमणलाई ऐतिहासिक बताउने गर्छन् । यसको मतलब के हो भने चीन विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाउँदै छ । त्यसका लागि विश्वका सबै राष्ट्रको मन… विस्तृत समाचार
५ अषाढ २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजदेखि पाँच दिने चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । ओलीको यो भ्रमणलाई नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक हेरिरहेका छन् । जनतामा यो उत्साह पनि ओलीले नै भरिदिएका हुन् । उनी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाली जनता भारतीय नाकाबन्दीको मारमा परेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थदेखि औषधिसम्मको अभाव थियो । त्यसले नेपाली जनमत पूरै भारतविरोधी बनेको थियो… विस्तृत समाचार
२९ जेठ २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने सपना देखेकै कारण ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अगाडि सारेका हुन् । विगत सत्तरी वर्ष नेपाली जनताले जुन दुःख कष्टका साथ जीवनयापन गरेर बिताए, अब भोलिका पुस्ताले त्यस्तो दुःख कष्ट भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा तय गरिएको हो । यो नाराको गन्तव्यमा देशलाई पु¥याउन ओलीले माओवादीलाई पार्टी एकीकरणमा ल्याए । मधेसी जनअधिकार फोरमलाई सरकारमा… विस्तृत समाचार
२२ जेठ २०७५
शम्भु श्रेष्ठ । नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाईको बहुमत सरकार बनाएपछि त्यसको असर छिमेकी मुलुकमा पनि परेको छ । विगतमा कुनै पनि प्रमुख दलको बहुमतको सरकार नहुँदा नेपालले छिमेकबाट जे जस्ता पीडा भोग्नुप¥यो, अब कम्तिमा पाँच वर्ष त्यो पीडा नेपाली जनताले भोग्नु नपर्ला भन्ने विश्वास गरिएको छ । यो विश्वासको श्रेय पनि नेपाली जनतालाई नै दिनुपर्छ । किनभने वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाई नजिकको मत… विस्तृत समाचार
​राष्ट्रिकवि घिमिरेलाई ‘नाजिकाजी स्मृति’द्वारा अभिनन्दन